MUUQAAL: Puntland oo ku Dhowaaqday Wakhtiga la Tooganayo Ragii kufsaday ee dilay Caasha Ilyaas | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Puntland oo ku Dhowaaqday Wakhtiga la Tooganayo Ragii kufsaday ee dilay Caasha Ilyaas
Jan 12, 2020 - 16 Aragtiyood
Gaalkacyo ( Kalshaale ) Maamulka Puntland ayaa si rasmi ah ugu dhowaaqay Wakhtiga la fulinayo Xukunka Dilka ah ee lagu Xukumay Raggii Kufsaday ee dilay Caasha Ilyaas oo ahayd Gabadh Da’yar.
Waxaa la sheegay in Xukunka Toogashada ah uu ka dhici doono magaalada Boosaaso, Subaxnimada Talaalada ah , 11-ka Bisha 2-aad ee Sanadkan.
Cabdifataax C.raxmaan Warsame , C.shakuur Maxamed Dige iyo Cabdisalaam C.raxmaan Warsame ayaa lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii iyo Kufsigii Caasha Ilyaas loogu gaystay Sanadkii aynu soo dhaafnay magaalada Gaalkacyo.
Arrin fiican hadaan wax iska bedelin.waana ku bogaadinayaa maamulkan inay qabtaan cid kasta oo gabadh faraxumeeya.
In laga xishoodo ma aha arintan waa in la diiwaan galiyo meel kasta oo kufsi ka dhaco.
Waa aafo meel kasta oo soomaaliya ah ka jirta.
Inta badan waa la qariyaa iyada oo la xeerinayo dhaqamo soo jireena.
Waa horumar in la qoro dhacdo kasta oo dhacda.
Xamar iyo meelo kale oo Koofur iyo Waqooyiba weli ma dhicin dad loo dilay sexual violence, dil iyo kufsi gabdhaha Somaliyeed lagu hayo.
Wadanku waa isku xiran yahay hadda ka dibna gabdha kale Somaliyeed iyo reerkeedu cadaalada dalban.
Hadda xitaa police ma tagaan waayo, waaba iska caadi,min cidna wax u qabanayn ogyihiin.
Reeraha 3 wiil iyo reerka Caaisha labadaba waa u tacsiyadayn.
Waa arin tragedy ahaa, in wax laga bartaan muhiim tahay. They deserved to die!
In la cafinayn wiilashaas waxaan ogaa maalintii la qabtay! Dadka gobolka weligood waxay isku dili jireen gabdhar la faraxumeeyey ama geel iyo xoolo la kala dhacay.
Ciid hal gabar waxaa u dhintay 100 nin, weliba marar badan…
Dumarku waa wax rag lagu bahdilo, nin aan dumarkiisa difaacan karina waa gun.
Dhulkaas marka beel la bahdilayo gabadhooda la kufsadaa ama geelooda laga dhacaa…
Haddii raggii maali jirey ama beeshii gabadhooda la kufsaday soo mar bixi waayaan oo dhiigeeda dhiig loogu darin…gunimo ayey u yaqaanaan.
Mudug iyo Bari colaad noocaas ah dhexdooda ah maanta naf uma hayaan.
Waa xal beelaha, gabdho iyo wiilal lagu badbaadinayo mustaqbalka.
Caaisho dhimatay AUN, ragii aakhiro u diray ayagana laga daba geyn. Al cadaalah..Justice
Acww Haddii ay dhaqan gasho waa talaabo loo qaaday caddaalada,shaki badan ayaan ka qabaa.
1-Qoyskii gabadha mag weydiideen.
2-Falka waa la cadeeyay in gabadha la kufsaday lana dilay.Maxaa intaa loo hayaa?
Puntland ma ahan maamul cusub oo aan maxkamadihiisu shaqayn.
HADDII DILKA LAGU FULIYO CADAALADDII WEY SHAQAYSAY.Balse 3 nin oo MS waliba laandheere Cumar maxamuud ah in loo dilo gabar Wabeeneeye ah soo dhawayn ayay mudan tahay laangaab oo dhanna iftiin baa u baxay.
@LOP aan ku saxo Garboharey oon maxkamad ka jirin 24hrs ayaa lagu dilay nin reer Xasan ah oo gabar Habar ciise,ah dil iyo kufsi isugu daray,laandheerenimo god ayaan ku hubsanay wiilka reerkooda 10nin magtood ayaa laga diiday Maxamuud Sayid Aadan ku xigeenkii Axmed madobe ayaa faragaliyay kuna fashilmay cadaalad ayay Somalidu u baahan tahay.
Mudug maalinta nin la dilo, mag la qaataa ama aano qabiil la sameeyaa laakiin gabar marka la kufsado waa arin ka weyn mag, waa xiniinyo taabad= rag ma yihiin ciddaan.
Mararka qaarkood wax ma hubsadaan marka gabar oynaysa oo la faraxuuneeyey cidda u timaado.
Taariiqdii hore gabdhaha xitaa laguma saqajaami jirin waayo xasuuq arxandaro ah ayaa ku xigi jiray.
Walaahi in kufsi laga aqoon Ciid ilaa Bari..
Hadda aduunkii waa isbedelay kuwa magaalada degen..Kufsi beryahan soo baxay!!!!
Waxaan oran jiray oo meeye beesheedii, walle dhiig baan u jeedaa.
Beryahaan wax kale la isku dilaa sida tuulada anaa leh aka maha unukaa leh.
Rag dhul isku dila.
Somali dhaqankooda waan aqaan.
Reer hebel gabdhahoodii siilka bari uga gurnay ayaa soo baxday. Yaab!👊
Arinkaas waan maqlay..sorry waan ilaaway.
Sxb dhaqanka waa saas, gabar kufsi lagu dilay beelo dhan ayaa isku dhamaaday.
Ogow waxaas maalin kasta ka dhacaan aduunka, Sweden gabar Swedish 8 jir ah nin Eklund la yiraado ayaa xaday oo inta duurka geystay kufsaday week markuu haystay dilay…
Ninkii waa la qabtay xabsi daain lagu xukumay..
Sweden dad ma dilaan, ilaah in nafta qaadi karo aaminsan yihiin.
Waxay aaminsan yihiin dilaagii haddaad disho dowladdana dilaa kale noqon.
Laakiin anaga Muslim nahay waa dil, beelahana lagu kala baadin.
Aniga wiilashaas dad baan isugu xignaa…..
Laakiin waxaan taageerayaa xaqa iyo sharciga….waan qirayaa…waa arrin xanuun badan labada dhinacba….laakiin xaqu waa cadyahay….waa in sharciga la fuliyaa…..tani waxay badbaadin doontaa, alle idankii gaboodfal badan oo gabdhaha soomaaliyeed loola bareeri jiray….tani waxay ina baraysaa in gabdhaha soomaaliyeed qaali yihiin, inaan gaboodfal lagula dhici karin…..tani waxay na baraysaa in sharcigu ka sarreeyo qabiilka….tani waxay na baraysaa in isku hallayn qabiil aanay sharciga kaa difaacayn…..tani waxay na baraysaa maxkamadaha soomaaliyeed in la isku hallayn karo oo kiis sidan u xajmi wayn, una xasaasi ah ay fulin karaan….tani waxay ina baraysaa in sharcigu sarreyo oo laga baqo….tani waxay na baraysaa in shrciga loo hoggaansamo oo haddii qoyskaagu sharciga jebiyo, aad aqbashid sharcigana u hoggaansantid….waxaan rajaynayaa in kiiskani sida sharciga waafaqsan uu ku dhammaado…..waayo waxaa ku jira cibro iyo cashar qaadasho badan iyo badbaado ummadeed….waxaa kiiskani xiri doonaa albaab aafo iyo dhaqan xumo ah oo hadda inagu ballaqan, inagu furan….waxaan bogaadinayaa ugu horrayn dowladda puntland oo karti,bisayl, aqoon iyo dhabar adayg muujisay una jixin jixi weyday cadaadiskii badnaa ee saaraa…waxaa kaloo ammaan mudan, qoyska gabadha oo iyana iska diiday xaal masduur, kuna adkaystay una hiiliyey in sharcigu sarreeyo….waxaan kale oo ammaanayaa isimada waa weyn ee qoyska wiilashu ka dhasheen oo iska diiday inay ka qareemaan kiiskaas, iskana diiday cadaadis la saaray…isku soo duuboo….kiiskani waa cashar taariikhi ah oo shar iyo khayrba ku suntanaan doona mustaqbalka iuo milgaha gabdhaha soomaaliyeed oo dhan….
Lagama daahin go’aanka weliba waxaan qabaa in lagu degdegay.
Wadamada hore u maray Maraykanka ayaa dila dadka dil in geysteen lagu cadeeyo..marka u yaraato 15 sano qaadataa in la fuliyo dilka, waayo marka xukun ku dilayso qof ibnu Adam ah waa in 100% la hubo.
Ayaga iyo maydka keliya ayaana is og, baaris ayaga is sheegsheegeen lagu xukumay.
Weli waxaa laga yaabaa in wiilasha midkood ahaa dameeri dhaan raacday oo iska dabo socday kana qayb qaatay dilka iyo kufsiga, laakiin wax abuul ah ku lahayn ama shirqoolka.
Maraykanka nin death row 20 sano sugayey ayaa la ogaaday in runtii asaga ahayn, DNA ka dib iyo war cusub la helay.
2 sano gudahood in dil ku fuliso, waa Kangroo court.
Waayo qofka marka disho naftiisa masoo celin kartid, waa in hubto oo xabsi kusii hayso.
Dilka wiilashaan lalama daahin ee waa lagu degdegay..international rules.
Albaab walba waa lasoo oodo oo 110% la hubo.
Malaha Puntland way hubsadeen. I don’t know.👋
Hambalyadda aan maamulka puntland u dirayo Waxaan lasugayaa maalinta caddaaladda lamariyo denbiilayaasha damiirlaawayaasha ah,
Waxaan aamin sanahay inay inay dhibaateeyeen hablo farabaddan oo soomaaliyeed.
Markaa bal aan sugno maalintaa labalan qaaday Caddaaladda caaishi ay helayso.
Waa maalin ay ummadda soomaaliyeed iyo dhamaan dadka caddaaladda jeceli ay sugayaan
Ina adeer, haddaad wiilasha is xigtaan anigana beel ahaan waan is xignaa, taas oo macnaheeda yahay,
Aqoon yahay Dusha waa Ina Adeerkay..kkkkk
Dusha Aboobo miyaad ka timid? Kkkkkk
Samir iyo iimaan Caaisha iyo 3da wiil…
Indeed very tragic? Laakiin Ciyaalkaan qooqay oo guska la ordaya oo sexual violence carada keenay, waa daad u baahan in la iska mooso.
They are tugs deserved to die, I wish in Puntland live time prison jiri lahaa sida Europe.
But that’s what we have today.
Asc mr land of punt sxb hakufaanin anagaa ugu horeeyney nin gabarkufsaday oo latoogto waxaa idinkaga horeeyey reer gedo waxaana lagu toogtey magalada garbahaarey oo weliba adinku waad ladahdeen lakiin reer gedo horeey katogtaan waase arinfiican in aaqirloodifi bahalada gabdha cunaya wabilaah towfiiq
Hadii ragaasi la dilo waa talaabo hore loo qaaday oo xagga dadnimada loo qaaday.
U malayn maayo in la dilidoono ragaasi.Duruufo badan ayaa ku gadaaman.Duruufo qabiil way ku gaadamanyihiin,dilal hore u dhacay way ku gadaamanyihiin,kufsi hore u dhacayna wuu ku gaadamanyahay.dawlad shraci ah oo amarka xoog ku fulisaana meesha kama jirto.
In ragaasi la dilaa waa adag tahay,wayna dhicikartaa.
Marka wiilashu da’daa dhallinyaranimada maryaan hormones koodu cirkaasuu marayaa, qofkii soo marayna waa ogyahay kii hadda ahina waa garanayaa. Mar haddaan wiilasha markaaba loo guurin karin oo dhaqaalahu diidayo, laba mid uun waa in yeelaa. Waa in sida carabta hablaha guryaha lagu xareeyaa oo la kala ilaaliyaa wiilasha iyo dumarku inay isu dhowaadaan. Haddii kale waa in lasoo celiyaa right light streets ka jiri jiray magaalooyinka, markaan magaalo leeyahay kama hadlayo daaro dhowr qof oo isku reer ihi meel ka taageen, waxaan ka hadlayaa cosmopolitan centres . Magaalooyinka dalku waxay lahaan jireen RED LIGHT streets, Hargiesa waxa la odhan jiray Fucking Street, Burco – white Taxi, Berbera – Jaamo Laaye, Mogadishu oo iyadu ahayd magaalada ugu dadka badan waxay lahayd 3 red light street oo kala derejo ah: Shaangani – 1st Class; Waaberi – 2nd Class, Buurka – 3rd class, waxa jirtay Beexaani laakiin taasi iyadu waxay ahayd scort business oo waa inaad Carab taqaanaa howlaha kuu fudueeya, Marka, Boosaaso iyo Kismayo intaba waa jireen. Haddii labadaa la waayo xaalku sidan uun buu sii ahaanayaa. Meelahan dadka dembigaa gala la ciqaabayo waa meelaha tirada yar ee nidaamku ka jiro ee dadka la ilaalinayo, ka feker dalka intiisa badan ee aan dadka cidina ilaalineyn.
Aad baan ula yaabanahay nin Weyn oo soo qoraya wadamada hore u maray sida maraykanka adeer wax kaa Galay ma jiraan dhul baad leedahay iyo dhaqan ka fakar diintaada aduunkana Cilmi waa laga bowsadaa dhaqan lagama bowsado cid walba keeday raacdaa ama ha hour maternity ama ha dambeeyeen fadlan hays Yasina indhahana ha u taagina dal kale wax barashaduna ma aha in aad tussle u soo qaadato sida maraykanka iyo yurub waxa aan hadaka iga keenay ninkaas Tusaalaha u soo qaadanaya dilka